darnaanta iyo mudnaanta - maxay ku kala duwan yihiin?
Ugu Weyn Ee Qa Darnaanta iyo Mudnaanta - Waa maxay Faraqa?
Darnaanta iyo Mudnaanta - Waa maxay Faraqa?
Darnaanta iyo Mudnaanta labadaba waa astaamaha cilladda waana in lagu soo gudbiyaa warbixinta cilladda. Macluumaadkan waxaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo sida ugu dhakhsaha badan ee cilladda loo xalliyo.
Darnaanta iyo Mudnaanta
Darnaanta cilladdu waxay la xiriirtaa inta uu le'eg yahay cayayaanku. Badanaa darnaanta waxaa lagu qeexaa qasaaro maaliyadeed, waxyeelo deegaanka, sumcadda shirkadda iyo luminta nolosha.
Mudnaanta cilladdu waxay la xiriirtaa sida ugu dhakhsaha badan cilladda loo hagaajiyo loona geeyo server-yada tooska ah. Marka cilladdu ay tahay darnaan sare, waxay u badan tahay inay sidoo kale yeelan doonto mudnaan sare. Sidoo kale, cillad darran oo hooseysa ayaa caadi ahaan yeelan doonta mudnaan hoose sidoo kale.
In kasta oo lagu taliyay in la bixiyo darnaanta iyo mudnaanta labadaba marka la soo gudbinayo warbixinta cilladda, shirkado badan ayaa isticmaali doona mid kaliya, sida caadiga ah mudnaanta.
Warbixinta cayayaanka, Darnaanta iyo Mudnaanta waxaa sida caadiga ah buuxiya qofka qoraya warbixinta cayayaanka, laakiin waa inay dib u eegaan kooxda oo dhan.
Darnaanshaha Sare - cayayaanka mudnaanta sare leh
Tani waa marka dariiqa weyn ee loo maro arjiga la jabiyo, tusaale ahaan, websaydhka eCommerce, macaamiil kastaa waxay helayaan fariin qalad ah oo ku saabsan foomka ballansashada mana bixin karaan amarro, ama bogga sheyga ayaa tuuraya jawaab 500.
Darnaansho Sare - Cayayaanka Mudnaanta Yar
Tani waxay dhacdaa marka cayayaanka ay sababaan dhibaatooyin waaweyn, laakiin waxay ku dhacdaa oo keliya xaalado ama xaalado aad u dhif ah, tusaale ahaan, macaamiisha adeegsada daalacashada da 'weyn ma sii wadi karaan iibsashada alaabtooda. Sababtoo ah tirada macaamiisha leh daalacayaal aad u da 'yar ayaa aad u hooseeya, ma ahan mudnaan sare in la saxo arrinta.
Mudnaanta Sare - Cayayaan darran oo hooseeya
Tani waxay dhici kartaa markii, tusaale ahaan, astaanta ama magaca shirkadda aan lagu soo bandhigin websaydhka. Waa muhiim in arrinta sida ugu dhakhsaha badan loo saxo, in kastoo aysan u geysan waxyeello badan.
Mudnaanta Hoose - Cayayaanka Darnaanta Yar
Xaaladaha halka cayayaanka uusan keenin musiibo oo kaliya uu saameeyo tiro aad u yar oo macaamiil ah, darnaanta iyo Mudnaanta ayaa loo qoondeeyay hoose, tusaale ahaan, bogga siyaasada asturnaanta waxay qaadataa waqti dheer in la soo raro. Dad badani ma arkaan bogga siyaasadda asturnaanta iyo rar gaabis ah macaamiisha wax badan ugama dhimayso.
Kor ku xusan waa uun tusaalooyin. Waa kooxda ay tahay inay go'aan ka gaarto darnaanta iyo mudnaanta bug kasta.
kamaradda s7 edge vs iphone 7
iphone 7 taleefanka taleefanka ayaa barafoobaya
Macaamiilka Walmart wuu xanaaqay ka dib amarkiisii ​​iPhone 6 ee Black Friday la joojiyay
Samsung Galaxy S9 iyo S9 + vs Galaxy S8 iyo S8 +
Ma ogtahay: waad jari kartaa microSIM si aad nanoSIM naftaada si fudud ugu hesho
Walmart ayaa laga yaabaa inay muujiso heshiisyadii Jimcaha ee ugu wanaagsanaa ee iPhone XS, XR, iPhone 8, iyo iPhone X
Sawirkani ma caddeynayaa in Samsung Galaxy Note 7 uu yahay mid aan biyuhu xirin?
IPhone 13 awoodda batteriga iyo batteriga daadanaya
Hangouts for Android hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad dejiso dhawaaqyo caadiya iyo dhawaaqyo ogeysiis ah
La noolaanshaha kamaradda Apple iPhone 6: ma ku filan yihiin 8 megapixels? (qaybta 4)
Fitbit Sense iyo Versa 3 cusbooneysiintu waxay ku dareysaa heerarka SpO2, jawaabaha Google ee la maqli karo